Deg DegPuntland iyo Jubaland oo Sheegay ilaa shan Qodob la Fuliyo in aysan Shirka Xalane Ka qeyb galayn. – KHAATUMO NEWS
Deg DegPuntland iyo Jubaland oo Sheegay ilaa shan Qodob la Fuliyo in aysan Shirka Xalane Ka qeyb galayn.
Qorshihii shirkii ay beesha caalamka soo qaban qaabisay ee Afisyoone ayaa u muuqda inuu isbeddelay, ayada oo beesha caalamka ay go’aansatay in maalmo dib loo dhigay, si si hoose loo xaliyo arrimo la isku hayo ka hor inta aanu shirka furmin.
Shirka ayaa fashilmay kadib markii dowladda ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay shirka ku fashilineyso, taasi oo ka carreysiisay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland. Waxaa tallaabooyinkaas ka mid ahaa ciidankii uu Saciid Deni sheegay in lagu hareereeyey Xalane, kuwii garoonka diyaaradaha la geeyey, ajendihii shirka oo ayadoo aan laga heshiis ay dusisay Villa Somalia iyo Farmaajo oo weli diidan inuu wareejiyo awoodda.
Maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa shan qoodob ku xidhay ka qeyb galka shirka Xalane
Previous Post: Deg Deg Daawo:Shacabka laascaanood ka hadlay shirka Muqdisho Ka furmaya.
Next Post: Deg Deg:Wasiir janaan iyo Axmed Madoobe Ma Xeeladaysi Cusub Ayay wadan?
S. Deni iyo Axmed Madoobow, Mr. Farmaajo waa madaxweynha Jumhuriyadda Soomaaliyeed illa doorasho dhacdo oo wax isbedellaan. Haddii isbedel iyo doorasho aad diidaan, xafiiska Madaxweynimadda waxa sii hayndoonna Mr. Farmaajo illa iyo Qiyaamaha. Sidaas ulla socda.
Xishood oo ilaahay ka xishoo.
Beenta iyo fitnadana jooji.
Caadaqaate magaca reerka ha siisan$50